iPhone Archives | Pyae Heinn Kyaw's Blog
Pyae Heinn Kyaw's Blog
Sharing Ethical Hacking, Cyber Security related knowledge. You can also find out contents about iOS and macOS.
Calendar ထဲကနေ ခဏခဏ Noti တက်နေတဲ့ Spam Event တွေကို ဖျက်လို့ရမယ့်နည်းလမ်း
Apple, HowTo, iOS, iPad, iPadOS, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အခုတလော ကြုံတွေ့နေရတာကတော့ Calendar Event တွေရဲ့ ပြဿနာပါပဲ သင့်အနေနဲ့ Safari မှာ Web browsing လုပ်နေရင်းနေနဲ့ တခြား Website URL တခုကို Auto Redirect လုပ်ခံသွားရမယ် .. အဲ့ဒီ Website ကသင့်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့နည်းနဲ့ သူတို့ App ကိုသွင်းခိုင်းမယ် ဒီ Calendar Spam တွေက 18+ Website တွေနဲ့ Channel Myanmar လို Ads များတဲ့ Website တွေကနေ တဆင့်ဝင်လာတာပါ .. ဒါကြောင့် ဒီလို Website တွေထဲဝင်ရင် ဘာနှိပ်ခိုင်းခိုင်း စာသေချာဖတ်ပြီးမှ နှိပ်ဖို့လိုပါတယ် ဥပမာပြောရရင် “သင့်ဖုန်းမှာ Virus တွေတွေ့ထားပါတယ် …
Calendar ထဲကနေ ခဏခဏ Noti တက်နေတဲ့ Spam Event တွေကို ဖျက်လို့ရမယ့်နည်းလမ်း Read More »
ဖုန်း Silent လုပ်ထားရင်တောင် အရေးကြီးတဲ့ Contact တွေဆီကဖုန်းလာရင် ဖုန်းသံမြည်အောင်လုပ်ထားနည်း
Apple, HowTo, iOS, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ဒါကတော့ လူတော်တော်များများလဲ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ် .. ဖုန်းသံကို Silent လဲလုပ်ထားချင်တယ် .. ဒါပေမယ့် အရေးကြီး Call တွေလဲလွတ်သွားမှာစိုးတဲ့ အဖြစ်မျိုးပေါ့ .. ဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက် Apple က Emergency Bypass ဆိုတဲ့ Feature ထည့်ပေးထားပါတယ် Do Not Disturb ဖွင့်ထားရင်တောင် Emergency Bypass On ထားတဲ့ Contact တွေကဖုန်းဝင်လာရင် ဖုန်း Ringtone မြည်မှာဖြစ်လို့ အရေးကြီးလူတွေရဲ့ Contact ကို Emergency Bypass On ထားသင့်ပါတယ် လုပ်ဆောင်ပုံကတော့ သက်ဆိုင်ရာ Contact ထဲဝင်ပြီး ညာဖက်အပေါ်ဒေါင့်က Edit ကိုနှိပ်ပါ .. အဲ့ဒီက Ringtone ဆိုတဲ့အထဲဝင်ပြီး Emergency …
ဖုန်း Silent လုပ်ထားရင်တောင် အရေးကြီးတဲ့ Contact တွေဆီကဖုန်းလာရင် ဖုန်းသံမြည်အောင်လုပ်ထားနည်း Read More »
iPhone တလုံးမှာ ဖုန်းနံပါတ် ၆ လုံးထိထည့်ထားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
UNICODE ဒီနည်းကတော့ Physical Dual Sim တွေနဲ့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပဲ eSim သုံးထားတဲ့ iPhone တွေနဲ့သာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် .. အရင်ဆုံး eSim ဆိုတာဘာလဲရှင်းလိုက်ကြရအောင် eSim ဆိုတာကတော့ Embedded Sim ဒါမှမဟုတ် Electronic Sim လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကျ Sim card တွေဟာ Physical Sim လို့ခေါ်ပြီး ဒီ Physical Sim ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Sim Card ကိုဖုန်းထဲထည့်သွင်းထားရပါတယ် .. ဖုန်းတမျိုးနဲ့တမျိုးလဲ Sim card slot အရွယ်အစားမတူလို့ Nano Sim, Micro Sim စသဖြင့် Sim card အရွယ်အစားမျိုးစုံလဲရှိပါတယ် .. ဒီတော့ eSim …
iPhone တလုံးမှာ ဖုန်းနံပါတ် ၆ လုံးထိထည့်ထားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း Read More »
သင့် iPhone က ဘယ် Region အတွက်ထုတ်ထားတာလဲဆိုတာကို အလွယ်တကူခွဲခြားနည်း
Apple, HowTo, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE Apple ဟာ iPhone တွေကို တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီး Region Code ခွဲထားပါတယ် .. ဒီလိုခွဲထားလို့ iPhone တွေဟာ Quality ကွာခြားမှုရှိလားဆိုတော့ မရှိပါဘူး .. Apple ဟာ iPhone တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ Supplier တွေဆီကနေ ဝယ်ယူပြီး တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ Foxconn စက်ရုံမှာ တပ်ဆင်ပါတယ် .. အခုနောက်ပိုင်းတော့ Foxconn စက်ရုံဟာ India မှာပါ တည်ဆောက်ထားပြီဖြစ်ပြီး အနာဂတ် iPhone တွေကို India မှာတပ်ဆင်သွားတော့မှာပါ ဒီစက်ရုံကနေထွက်လာတဲ့ iPhone တွေကို Apple က အရည်အသွေးစစ်ဆေးပြီး အောင်မြင်မှသာစျေးကွက်ကိုတင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ် .. တကမ္ဘာလုံးကိုတင်ပို့နေတဲ့ iPhone တွေအကုန်လုံးနီးပါးက ဒီစက်ရုံကနေထွက်တာပါ …
သင့် iPhone က ဘယ် Region အတွက်ထုတ်ထားတာလဲဆိုတာကို အလွယ်တကူခွဲခြားနည်း Read More »
iPhone 12 Series မှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ် Model ကိုဝယ်ယူသင့်သလဲ?
Apple, iPhone / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ iPhone 12 ဝယ်မယ့်လူတွေအနေနဲ့ Mini, 12, Pro, Pro Max ၄ မျိုးထဲကမှ ဘယ်သူတွေက ဘယ် Model ကို ရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 1. iPhone 12 Mini iPhone 12 Mini ရဲ့ Specs တွေကိုအားလုံးပဲသိပြီးကြမှာပါ .. Specs တော်တော်များများက iPhone 12 Pro နဲ့တော်တော်တူပါတယ် .. ကွာတာဆိုလို့ RAM, Battery, Display Brightness, Build Quality လောက်ပဲကွာတာပါ .. iPhone 12 Mini ရဲ့ Battery က 2,227 mAh ပဲပါ,ပါတယ် .. တော်တော်လေးကိုသေးတာပါ …
iPhone 12 Series မှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ် Model ကိုဝယ်ယူသင့်သလဲ? Read More »
iPhone တလုံးတည်းနဲ့ အိမ်တလုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပြင် Bank Card တွေကိုပါ ဖုန်းထဲထည့်ထားနည်း
Apple, iPhone, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE အပြင်ထွက်ရင် ပိုက်ဆံအိတ်တွေ သော့တွေ ကဒ်တွေကိုင်စရာမလိုပဲ ဖုန်းလေးတလုံးနဲ့အပြင်ထွက်သွားလို့ရတဲ့ ဘဝကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖူးလား ? ဒီလိုဘဝမျိုးကို Apple Pay, Apple Wallet နဲ့ Home App တို့ကပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် Apple Wallet Apple Wallet ကိုအရင်ရှင်းပါမယ် .. အောက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ .. MasterCard တကဒ်ရယ်၊ Gong Cha က Member Card ရယ်၊ Apple Store Card တွေရယ်၊ Event Ticket တွေရယ်၊ Rewards Card တွေရယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ် Wallet ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ Card ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကို ဒီ Wallet App ထဲမှာ Digitalised လုပ်ပြီးထည့်ထားလို့ရပါတယ် …
iPhone တလုံးတည်းနဲ့ အိမ်တလုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့အပြင် Bank Card တွေကိုပါ ဖုန်းထဲထည့်ထားနည်း Read More »
မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့ Apple Product တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Accessory Brand များ
UNICODE အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ .. ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ လက်ရှိစျေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ Accessories Brand ပေါင်းစုံထဲကမှ သင့် iDevice အတွက် စိတ်ချရတဲ့ Brand တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ Post မှာ Brand4ခုကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်ရောင်းချနေတဲ့ Brand တွေပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဒီ Accessories တွေဟာလဲ Apple ကပေးအပ်ထားတဲ့ MFi Certificate ရရှိထားတဲ့ Accessories တွေမလို့ တခြားပေါပေါပဲပဲ Brand တွေလျှောက်သုံးနေတာထက်စာရင် ဒီလို Brand တွေသုံးတာက ကိုယ့် iDevice ရဲ့ Battery Health အတွက် အများကြီးပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာပါ MFi ဆိုတာဘာလဲ – https://www.pyaeheinnkyaw.tech/whati_is_mfi/ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Apple Original …
မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့ Apple Product တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Accessory Brand များ Read More »
iPhone Warranty က International Warranty ရောဟုတ်ရဲ့လား?
UNICODE အားလုံးထင်နေကြသလို iPhone Warranty ဟာ International Warranty မဟုတ်ပါဘူး International Warranty ဆိုတာ ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာဝယ်ပြီး ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာ Service လုပ်လို့ရတာကို International Warranty လို့ခေါ်ပါတယ် .. iPhone, iPad, AppleTV နဲ့ HomePod တို့ဟာ International Warranty ထဲအကျုံးမဝင်ပါဘူး .. ဒီအကြောင်းကို Apple ရဲ့ Warranty အကြောင်းပြောပြထားတဲ့နေရာမှာ ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ် (https://www.apple.com/legal/warranty/products/ios-warranty-rest-of-apac-english.html) International Warranty မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲ? ဥပမာ – သင်က US ကနေ iPhone ဝယ်လာတယ်ဆိုပါစို့ .. Singapore ရောက်နေတဲ့အချိန် သင့် iPhone ကပျက်သွားလို့ Singapore Store ကိုသွားပြမယ်ဆိုရင် …
iPhone Warranty က International Warranty ရောဟုတ်ရဲ့လား? Read More »
iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max တို့မှာပါဝင်လာတဲ့ Gold အရောင်ရဲ့ ထူးခြားချက်
Apple, iPhone, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max မှာသုံးပေးထားတဲ့ Gold အရောင်ဟာ လက်ရာထင်တာမျိုး တခြားအရောင်တွေလောက် သိပ်မဖြစ်ပါဘူး .. ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Gold အရောင်ကို ပြုလုပ်တဲ့ နည်းပညာဟာ တခြားအရောင်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ ကွာခြားလို့ဖြစ်ပါတယ် iPhone 12 Pro နဲ့ Pro Max မှာ Pacific Blue, Gold, Silver, Graphite ဆိုပြီး အရောင် ၄ ရောင်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် .. Gold ကလွဲလို့ တခြားအရောင်တွေဟာ Physical Vapor Deposition (PVD) လို့ခေါ်တဲ့ အရောင်တင်နည်းကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် Gold မှာတော့ high-power, impulse magnetron sputtering …
iPhone 12 Pro နဲ့ 12 Pro Max တို့မှာပါဝင်လာတဲ့ Gold အရောင်ရဲ့ ထူးခြားချက် Read More »
iPhone 12 Series နဲ့ HomePod Mini ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Apple
UNICODE Apple ကအခုလေးတင်ပြုလုပ်သွားတဲ့ Apple Event မှာ iPhone Model4မျိုးနဲ့ HomePod Mini ကိုမိတ်ဆက်သွားပါတယ် .. iPhone အကြောင်းအရင်စပြောလိုက်ရအောင် iPhone 12 Mini နဲ့ iPhone 12 Phone 12 Mini လေးဟာ iPhone 8 ထက် body ပိုသေးပြီး Screen Size က 5.4-inch ဖြစ်မှာပါ .. iPhone 12 ကတော့ 6.1-inch အရွယ်အစားရှိပါတယ် .. ဒီနှစ်ခုက Size ပဲကွာတာပါ .. ကျန်တာဘာမှမကွာပါဘူး iPhone 12 တိုင်းမှာ 5G ရပါပြီ .. 5G …
iPhone 12 Series နဲ့ HomePod Mini ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Apple Read More »
This website costs up to $50amonth to operate. We need your help!
iOS 15 ရဲ့ Feature အသစ်နဲ့ ပြောင်းလဲချက် 92 ခု
Monitoring လုပ်ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးအောင် စာတွေကို Encrypt လုပ်ပြီး SMS ပို့ကြမယ်
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမသွားခင် သင့်ဖုန်းမှာလုပ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အချက်များ
1.1.1.1 ဒါမှမဟုတ် WARP+ ဆိုတာ စိတ်ချရရဲ့လား? WARP+ GB တွေဘယ်လို Hack ရမလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သာ Ban ခံရရင် ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ?
© 2019 PHK Knowledge Sharing. All rights reserved | Developed by Pyae Heinn Kyaw
Copyright © 2021 Pyae Heinn Kyaw's Blog | Powered by Astra WordPress Theme